WAA MAXAY MATTIOLI: QOONDEYNTA UBAXYADA SIDA WAAFAQSAN QAABKA INFLORESCENCES OO LEH SHARAXAAD IYO SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Qaababka kala duwan iyo qaababka foomamka mattiola (Levkoy)
Levkoi waxaa sidoo kale loo yaqaannaa mattiola - waa dhir udub dhexaad ah oo ka tirsan qoyska qallafsan. Wuxuu ku koraa dalalka Yurubta Koonfureed, sidoo kale wuxuu ku kordhay xaaladaha cimilada ee baddan iyo degaannada gobollada kuugu dhow. Dibadda, ubaxa ma aha mid la dareemi karo, laakiin beeralay ubaxa u mahadcelinayaan caraf udgoon. Mattiola waxaa kale oo loo yaqaan "violet night" sababtoo ah xaqiiqda ah in carafka uu leeyahay muuqaal cajiib ah oo kudhaca urka jilicsan.
Cirku wuxuu ka kooban yahay 50 nooc, laakiin beerta waxay isticmaalaan laba beerood oo lagu qurxiyo mattioolka: geeska bidixda ah iyo kuwa bidixda leh.
Heerka Levkoy wuxuu u qaybsan yahay saddex kooxood oo kala duwan:
hoose - 15-30 cm;
celceliska - min 30-50 cm;
dhirirka - dhirta ka sarreeya 50 cm.
Ama 4 kooxood:
Cabbitaannada - illaa 20 cm;
hoose - 20-35 cm;
badhka sare - 35-50 cm;
sare - min 50 cm.
Waxaa jira in ka badan 600 nooc oo mattioli ah. Dhammaan noocyada kala duwan ee sida waafaqsan nooca laamood ee duurka waxaa lagu daraa laba fasal: jeexjeexay (gooyo iyo sariiraha ubaxa) iyo vygonochnye (stem hal). Sida ku qoran foomamka, qiyaasta ubaxa mattiola iyo inflorescences, waxaa jira kala qaybsanaan kooxo sideed kooxood.
Intaa waxaa dheer in levkoy, jasmine, mirabilis, digir macaan, wisteria, alison, phlox, lavender aad ku farxi doonaa caraf udgoon ee beerta. Dhirta Kuwani ma aha oo kaliya qiimaha qurxinta, laakiin sidoo kale leeyihiin hantida ka cabsan cayayaanka waxyeello ka beer iyo dalag beerta.
Kooxda mattiol oo leh qaabka baadiyaha ah ee pyramidal, wuxuu leeyahay qayb ka mid ah qaybaha hoose:
Ubax weyn - Cufan, dhexdhexaad ah iyo sare, ubaxyo ilaa 5 cm dhexdhexaad ah, wuxuu kala baxaa Juun ilaa Sebtembar.
Qeyb sare - ilaa 45 cm dhererka, caleemaha dhinaca si aad u horumarsan. Ubax laga bilaabo Juun ilaa Agoosto.
Caajis - ilaa 25 cm sare, waxay leeyihiin inflorescences isku dhafan, ubax dhacdaa June.
Ma taqaanaa? Bilawgii qarnigii 20aad, Botanistayaasha Faransiisku waxay marka hore soo saareen garabka bidix - marxaladda xilliga qaboobaha ilaa qaabka xagaaga, taas oo sannad walba ku duubi doonta waxa caan ah.
Erfutskie (gogol gaaban)
Iyadoo la tixraacayo noocyo badan oo Bisaylkiisa hore. Waxay leeyihiin caleemo qoyan oo aad u sarreeya, waxay gaartaa dhererka 40cm, caleemaha waaweyn ee lanceolate, ubaxa ubaxa. Waxaa lagu talinayaa in ay u koraan qurxinta beerta iyo jar.
Daq jeermis weyn oo ubax ah
Waxay ku xiran tahay jaangoyntu waxay ku kooban tahay qaybta sare ee geedka. Duufaanku waa yar yahay, laakiin aad u cufan oo leh ubaxyo cufan iyo kuwo weyn ilaa 6 cm. Midabka midabada ayaa kala duwan oo iftiin leh. Beerta waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan waxayna soo jiidataa dareenka isugeynta beeraha leh burooyinkeeda midab kala duwan. Ubaxku wuxuu dhacaa Juun wuxuuna soconayaa ilaa 60 maalmood.
Waa muhiim! Mattiol laba geesood ah oo aan lafdhabarka ah laguma beddeli karo meel, meesha nidaamkeeduna si xun ayuu ugu gudbiyaa dhammaan noocyada qaaxada.
Suuqgade Hal (Excelsior)
Kooxdani waxaa lagu kala soocayaa mid qudha, waxay loola jeedaa taayirada sare. Inflorescences xoog leh ayaa ka kooban ubaxyo waaweyn ilaa 6 cm dhexroor. Ubaxku wuxuu socdaa hal bil kaliya wuxuuna yimaadaa bisha Juun.
Dhirta ayaa leh cotyledons terry ee midabka cagaaran cagaaran iyo tan si fudud loo kala soocayo bilowga caleemaha. Wakiilada leh ubax fudud waxay leeyihiin midab buluug-cagaaran. Hayso muuqaal dabiici ah. Xilliga ubaxyada iyo muuqaalka waxaa loo qaybiyaa kooxo yaryar:
Dabayaaqada sare - gaari dhererkeedu yahay 60 cm Qalcadda, caleenta caleemaha waxay ka samaysan tahay ballaaran, geedo dahab ah. Ubaxyada waa kuwo waaweyn, oo ah labanlaab. Noocyo dabacsan.
Horaan hore - duurjoogta oo kor u kaca ilaa 65 cm caleemaha waa mid aad u ballaadhan, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah wakiillada kale. Duufaannada waxay ka kooban yihiin ubaxyo dhalaalaya illaa 20 cm oo dhaadheer, waxayna ka bilawdaan bilowga xagaaga ilaa laba bilood.
Hore yar - duurka waxay u eg yihiin kubad, gaaraan dherer 20 illaa 40 cm, waxay kala baxaan Juun 1,5-2 bilood.
Lixaad - aad leedahay hal asbuuc, mararka qaarkood waxaa jira wakiillo leh laanta daciifka ah. Dhererka wuxuu gaaraa 80 cm, ubaxyada iyo inflorescences waa kuwo waaweyn. Dareemaha ugu weyn wuxuu leeyahay kor u kaca dhinaca sare. Ubax laga bilaabo Juun ilaa laba bilood.
Ma taqaanaa? Diyaarinta mattiola ku wareegsan ukunta ama baradhada si weyn ayaa loo yareeyn karaa weerarka baradiidka Baradiidka Colorado. Waa muhiima weyn in marka la beero geedo eggplant horay u ahaa mattioli ubax ah.
Geedaha waa mid iswada leh oo jeexjeexan, ilaa 35-40 cm oo cagaar ah. Caleemaha cagaaran iyo kuwa cagaaran ayaa sarreeya, ballaaran, oo dhan, oval. Duufaanta cufan waxaa lagu go'aamiyaa ubaxyo waaweyn. Blossoms 2-2.5 bilood laga bilaabo Juun.
Isku day laba kooxood:
Large-flowered (Bismarck) - koraan illaa 70 cm Cawska wuxuu dhacaa bisha Luuliyo wuxuuna socdaa ilaa barafka ugu horeeya.
Remontny (Dresden) - Hayso qaab baadiyaha ah, dhererkuna waa ilaa 60 cm. Ubaxyo badan ayaa sameeya inflorescence dabacsan. Waxay kala-baxdaa Juun ilaa Nofembar.
Caleenta ee asliga ah waa mid qaro weyn. Dhererka 45 illaa 60 cm Cirifka pyramidal ee baadiyaha. Caleemaha waa dheeman ama qaabeyn, waxay leeyihiin dherer ah midabka buluug-cagaaran. Geedka ubaxa wuxuu ku xiran yahay ubucda ugu weyn, waxaana uu soconayaa 50 cm Gogoldhiga Gustomarovye wuxuu gaari karaa dhererka 4.5 cm.
Waa muhiim! Si loo hubiyo badbaadada dhirta ee gooyaa - waa in la soo saaro by xididka, iyo aan la jarin. Xididdu waa laga dhaqaa dhulka waxaana lagu dhejiyaa weel. Haddii dhirta si fudud loo gooyo, qiimaha qurxinta ma sii jiri doonto muddo dheer, iyo udgoonku ma faafo, tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay naqshada dhacdooyinka kala duwan.
Marka ugu horeysa, Levkoy wuxuu u muuqdaa inuu yahay ubax aan dhammeystirnayn, laakiin haddii aad u fiirsato isaga, wuxuu u beddelayaa sida aad u aragtid. Carafka cajiibka ah ee ka dhigi doona dhismahaaga ama xitaa gurigaaga si aad u raaxo leh, xitaa xilliga qaboobaha qaboobaha ayaa ku xusuusin doona xagaaga diiran. Buundada waxay leeyihiin fasalada kala duwan waxayna qurxin doonaan beertaada inta lagu jiro xilli kasta oo ubax ah. Waxaa haboon in la xusuusto in ubaxa mattioly aan u dulqaadan karin bacriminta organic.